Dɛn ne Sheol? Dɛn ne Hades?—Nea Bible Nsɛmfua Bi Kyerɛ | Bible Kyerɛkyerɛ
BIBLE de Hebri asɛmfua sheʼohlʹ ne ne Hela sɛso haiʹdes di dwuma bɛboro mpɛn 70 wɔ kasa abien a wodii kan de kyerɛw Bible no mu. Nsɛmfua abien no nyinaa fa owu ho. Bible nkyerɛase bi kyerɛ ase “ɔdamoa,” “hell,” anaa “amoa.” Nanso, wonni nsɛmfua pɔtee a wɔde kyerɛ Hebri ne Hela nsɛmfua yi ase pɛpɛɛpɛ wɔ kasa dodow no ara mu. Enti New World Translation de nsɛmfua “Sheol” ne “Hades” na edi dwuma. Dɛn na saa nsɛmfua yi kyerɛ ankasa? Ma yɛnhwɛ sɛnea wɔde nsɛmfua yi di dwuma wɔ Bible afã horow bi.
Ɔsɛnkafo 9:10 ka sɛ: “Adwuma ne adwene ne nimdeɛ ne nyansa nni asaman [Sheol, NW] a worekɔ hɔ no.” So eyi kyerɛ sɛ Sheol kyerɛ amusiei anaa amoa pɔtee bi a ebia yɛasie yɛn dɔfo bi wom? Dabi. Sɛ Bible ka amusiei anaa ɔdamoa pɔtee bi ho asɛm a, ɛde Hebri ne Hela nsɛmfua foforo na edi dwuma, na ɛnyɛ sheʼohlʹ ne haiʹdes. (Genesis 23:7-9; Mateo 28:1) Afei nso, Bible mfa asɛmfua “Sheol” nnyina hɔ mma ɔdamoa bi a wosie nnipa dodow bi wom te sɛ abusua bi amusiei, anaa ɔdamoa bi a wosie nnipa pii wom.—Genesis 49:30, 31.
Ɛnde, ɛhe ankasa na wɔfrɛ no “Sheol” no? Onyankopɔn Asɛm kyerɛ sɛ “Sheol” anaa “Hades” kyerɛ biribi a ɛsen ɔdamoa kɛse bi a wosie nnipa pii wom koraa. Sɛ nhwɛso no, Fante Bible no ka wɔ Yesaia 5:14 sɛ Sheol “atrɛ n’akɔndɔ mu, na ɔahan n’anomu petoo.” Sɛnea yɛbɛka no no, ɛwom sɛ Sheol amene awufo pii a yennim wɔn dodow de, nanso ɛte sɛ nea ɛrepɛ nnipa foforo amene wɔn bere nyinaa. (Mmebusɛm 30:15, 16, NW) ‘Sheol mmee ara da.’ (Mmebusɛm 27:20, Fante Bible) Ɛkyerɛ sɛ Sheol nyɛ ma da. Enni nnipa dodow a ebetumi afa. Enti Sheol anaa Hades nyɛ beae pɔtee bi ankasa. Mmom no, ɛyɛ adesamma sɛnkyerɛnne kwan so damoa, baabi a adesamma dodow no ara kɔda twɛn owusɔre.
Bible nkyerɛkyerɛ a ɛne owusɔre no boa yɛn ma yenya “Sheol” ne “Hades” ho ntease foforo. Onyankopɔn Asɛm de Sheol ne Hades ka owu a owusɔre wom ho asɛm. * (Hiob 14:13, Fante Bible; Asomafo Nnwuma 2:31; Adiyisɛm 20:13) Onyankopɔn Asɛm ka nso sɛ ɛnyɛ nnipa a wɔasom Yehowa nkutoo na wɔwɔ Sheol anaa Hades, na mmom nnipa pii a wɔansom Onyankopɔn nso wɔ hɔ bi. (Genesis 37:35, NW; Dwom 55:15, Fante Bible) Enti, Bible kyerɛkyerɛ sɛ “bere bi bɛba a wɔn a wɔteɛ ne wɔn a wɔnteɛ bɛsɔre afi owu mu.”—Asomafo Nnwuma 24:15.
^ nky. 4 Nea ɛne wɔn a wɔwɔ Sheol anaa Hades bɔ abira no, wɔka awufo a wɔrennya owusɔre no ho asɛm sɛ wɔwɔ “Gehenna.” (Mateo 5:30; 10:28; 23:33) Te sɛ Sheol ne Hades no, Gehenna nyɛ beae pɔtee bi.
Share Share Dɛn ne Sheol ne Hades?
bh kr. 212-213